The Sketch of Skies | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← The Future Media
MBAA Results →
January 10, 2009 · 9:04 pm
The Sketch of Skies
အမေနေ့။ ဘာမှ မမှတ်မိအောင် မိုက်ရိုင်းသော ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရပါ။ ကိုရင်ညိန်းက စာအုပ်ကလေးလုပ်ကြဖို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။ မောင်အန့်၊ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ ထွန်းတောက်နေနဲ့ ကျနော်တို့ မအိပ်မနေ စိတ်ဝင်တစား လုပ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဖွဲ့တည်ရာ မီဒီယာ အဖွဲ့ ထုတ်ဝေမှုအဖြစ် တာဝန်ယူ လုပ်ပေးတယ်။ သေသပ်ကျနပြီး စိတ်တိုင်းကျတဲ့အထိ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ မောင်အန့်၊ ထွန်းတောက်နေနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တမြေရပ်ခြားက ထိုင်စောင့်ပေးနေတဲ့ စီစဉ်သူ ကိုရင်ညိန်း၊ သတင်းကြားလို့ လာစောင့်ဖတ်တဲ့ မောင်မိုးတို့ကို အမှတ်ရပါတယ်။
ကျနော်က ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေးတယ်။ ကဗျာနာမည်က ‘ခွေးမတစ်ကောင်၏ ပို့ချချက်’ (The Lecture ofaBitch) ပေါ့။
ကဗျာတစ်အုပ်လုံး Click Here
ကျနော့် ကဗျာ – အောက်မှာ ဖတ်ပါ။
Filed under e-Book, Poem
Tagged as e-Book, Poem
7 responses to “The Sketch of Skies”
I am mute after reading poem.
Thanks for the poems you share.
Cheers ! dear poets
cannot download the whole book
>ksl> you need to get account of iFile. do it. you can easily download and upload as well.
ksl>>you can download directly here..! no register, no singup…. http://myanmargenius.com/download/mother_day_poems.pdf
It’s the best poem (related with mom’s love) I have ever read.
Pingback: Need Help !!! « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я
Pingback: A May « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я